6 Week itinyekwu Hacks Master Class - Foneelu Of The Day
Mgbe ị na-na-abụ abụ maka a 6-izu foneelu hacks nwe klas, na ị na-lining elu na-enweta ụfọdụ oké ihe ọmụma banyere ụzọ mee ka a Mint inweta uru nke oru emehie gị osompi nwere ike ime ọbụna na nzube.
Ị ga-anụ banyere ihe nile na ndị a na-arụ ọrụ sessions.
Ị ga-abụ na ọtụtụ-amalite gị ọmụmụ ụzọ iji pụọ funnels, ụzọ nju, ewu nri Ndepụta, Mgbakwunye ahịa na nke ahụ bụ nnọọ n'ụbọchị nke mbụ!
Dị ka ị gaa n'ihu, ị ga-abụ na-amụ banyere sales funnels, ngwa ngwa nmepe, esi mee ka gị onwe gị na webinars na ahịa azum.
The ikpeazụ isiokwu dịkwa mkpa dị otú ahụ dị ka ngwaahịa igba egbe funnels na ngwa ngwa ọdịnaya e kere eke.